Kôngô (RDK) : Lozam-pifamoivoizana an’habakabaka faha-5 ao anatin’ny taona iray monja, saingy ny fidangan’ny vidin-tsakafo no loza tena izy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2008 20:46 GMT
Nambaran'ireo biraom-paritr'ireo Fantsona Fampahalalam-baovao fa tafakatra 75 ny isan'ireo olona maty tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina “cargo” fotoana fohy monja taorian'ny niaingany, tany Goma omaly [Talata 15 Aprily 2008]. Ny fihoarana izay fetran'ny lanjan'ny mpandeha sy ny entany no mety ho anton'izany loza izany. Hatramin'ny volana Jona 2007 dia ity no lozam-pifamoivoizana an'habakabaka faha-5 izay namoizana ain'olona.
Tamin'ny volana Oktobra tamin'ny taon-dasa, dia efa nampitandrina i Du Cabiau à Kinshasa fa “tsy iny lozam-piaramanidina iny … no « ho farany »” raha nanoina ny fianjeran'ny fiaramanidina tamin'ny kartie isan'ny mahantra sy be mponina tokoa any Kinshasa, renivohitry Repoblika Demôkratikan'i Kôngô.
Mampalahelo anefa fa tanteraka tokoa izay nahiany. Amin'ity voina vaovao nidona ity, dia fakafakain'i Cabiau izay ho fahitan'izao tontolo izao an'i RDK noho ny fianjeran'ny fiaramanidina, RDK izay matetika loatra no idifan'ireo fantsona fampahalalam-baovao tandrefana na dia tamin'izy nilomano tao anivon'izay isan'ny loza goavana indrindra teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona aza.
Izaho akory tsy mandà ny lalàna mamehy ny fifanandrifiana itaterana na tsy izay vaovao. Saingy marihiko fotsiny fa mitanila ny mizana. Am-pahanginana no ijalian'i Afrika ireo “lavaka tsy hita farany” (mba marina tamin'ity indray mitoraka ity ny fitenin'i Bernard-Henri Lévy, Filosofa, mpanotra sady mpanao gazety Frantsay BHL). Zary tsy misy miraika intsony amin'ity fifanampian'ny fahantrana sy fijaliana ity. Ny ireo Somaliana na ireo Kôngôley dia tsy nisy nitodihan'ny fahazavan'ny taratry ny jiron'ireo fampahalalam-baovao … tsy nisy na dia mpaka lahatsary iray monja aza. Angamba tsy mendrika ny hotantaraina akory ireo vehivavy aman'alinaliny izay naolana, ireo tanàna aman-jatony voaroba na ireo mponina tao aminy izay miaina amin'ny horohoro. Tsy mety mazava amiko ny anton'izany.
Ankehitriny, ny loza vaovao dia ateraky ny fidangan'ny vidin'entana. Aman-tapitrisany ireo olona tandidomin-dozan'ny kere. Anefa dia mbola matoritory ny olona raha tsy efa mipoaka ny rotaka, izay vao taitra … kely fotsiny anefa. Nambaran'ny gazety novakiako tamin'ny maraina fa “tao anatin'ny herinandro latsaka dia avo roa heny ny fisondrotry ny vidin'ireo entana PPN [Produits de Première. Nécessité] teny an-tsenan'i Kinsasha. Very hevitra ireo renim-pianakaviana, tsy fantatra intsony izay masindahy na masimbavy ivavahana”…[ny vidin'ny] kobana mangahazo dia nisondrotra avy amin'ny 100 hahatratra 150 FC [Farantsa Kôngôley], ny katsaka 150 dia lasa 200 FC. Tao anatin'ny andro vitsy monja dia nisondrotra taha 25% ny vidin'ny siramamy, ny tsaramaso kosa 50%.
Tsy dia mahatalanjona toy ny fianjeran'ny fiaramanidina izany, anefa ny vokadratsiny dia atahorana ho mandripaka kokoa. Ohatry ny nitoriteny tany an'efitra i Jean Ziegler [Mpikaroka momba ny fiaraha-monina Soisa, mpitatitra manokana momba ny toe-tsakafo eran-tany hoan'ny firenena] …